Nin Hal Mar Laba Gabdhood Wada Kuf Saday Faafahin | shumis.net
Home » Layaab » Nin Hal Mar Laba Gabdhood Wada Kuf Saday Faafahin
Nin Hal Mar Laba Gabdhood Wada Kuf Saday Faafahin
sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin ka dhex baxay arrimahan oo dhan ka tagyna naxariista, sida ay sheegtay maamulka dawlada hoose ee Dubai-Emirates ninkan ayaa khasab ku kufsaday laba gabdhood.
waxaa laga yaabaa inaad yaaban tihiin ood isleedihiin ninkani ma “Superman-baa” siduu labo dumara inta uu u yimaado ugu khasbi karaa inaa la sameeyo xumaanta halmar ah isaga oon wax huba wadan.
ninkan falkan ku kacay ayaa ka bartay mid kamid ah baraha bulshada gabadh shaqaale ah oo asalkeedu yahay filipiin da’deeduna tahay 27 sano.
ninkan ayaa kula sheekaysanayay gabadhan magaca ah “Kaylo” iskuna sheegay inuu ka soo jeedo Brazil, ayaa ka codsaday gabadha inay Coffee wada cabaan, gabadhaa ayaa ka ogolaatay.
gabadhii iyo saaxiibadeed oo iyana 25 jir ahayd ayaa ka soo wada baxay gurigii, markii ay u yimaadeena waxa uu ku qanacsiiyey inay u raacaan gurigiiisa si ay Coffee ugu soo wada cabaan.
waxa ay sheegtay gabadhu in ninkani markii ay guriga gaadheenba uu ku bilaabay salaax iyo fara taa-taabsiin dareen wadata, markii ay arkeen sida filimku ku socdo ayay istaageen oo isku dayeen inay baxaan laakiin inta uu midi caloosha kaga qabtay saaxiibadeed ayuu yidhi “hadaad isku daydaan inaad i diidaan ogaada asxaabtayda oo dhan ayaan idiinku yeedhayaa oo idin la samaynaysa”.
gabdhihiii waa ay ku khasbanaadeen wuuna la sameeyey wixii uu ka doonayey, waxay sheegeen gabdhahani inuu ninkani suuliga galay iyana iyagoo fursadan ka faa’idaysanaya ay baxsadeen, police-kana war geliyeen.
ninkii ayaa maxkamadi ku xukuntay saddex sano oo xadhig ah kiiskan xoog galmo ku raadiska ka dhanka ahaa labadan gabdhood ee ree philipine.
Title: Nin Hal Mar Laba Gabdhood Wada Kuf Saday Faafahin